भा’गर’थी भ’ट्टको ह’त्यामा सं’लग्न दिनेश भट्टलाई सार्वजनिक ग’रिदै, यसरी रु’दै स्वी’कारे ह’त्या… – NepalajaMedia
भा’गर’थी भ’ट्टको ह’त्यामा सं’लग्न दिनेश भट्टलाई सार्वजनिक ग’रिदै, यसरी रु’दै स्वी’कारे ह’त्या…
February 17, 2021 140
धनगढी : बै’तडीको दो’गदाकेदार गाउँपालिका ७ की भा’गर’थी भट्टको ह’त्यामा सं’लग्न भनि पक्राउ प’रेका दिनेश भट्टले सा’विति बयानमा ह’त्या स्वी’कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यसअघि प्रहरी र परिवारका सदस्यलाई आ’फू पु’रै कक्षा पढेर आएको बताए पनि विद्यालयको रे’कर्ड र खो’चलेकमा भेटिएका साथीहरुका आ’धारमा उनी टि’फिन समयमा नै घर गएको दे’खिएपछि प्रहरीको अनुसन्धान उ’नीतिर के’न्द्रित पारिएको थियो । दिनेश भा’गर’थीका नजिकका भाइ ना’ता पर्छन् ।
दिनेश टि’फिनको समयमा विद्यालयमा भ’लिबल खे’लेर घर आए । उनीसँगै टि’फिनमा घर आएका भा’नदेव भट्ट र लिलाघर भट्टले उनलाई खो’चलेक बजारमा दे’खे । खो’चलेक बजार उनीहरुले पढने स’नातन ध’र्म माविबाट झण्डै ५/७ मिनेटको पै’दल दुरीमा पर्छ । खोचलेक बजारमा तीनैजना र भागरथीको भेट भयो ।भा’गरथीले उनीहरुसँग घर कतिबेला जाने भनेर सो’धिन । भा’नदेब र लि’लाधरले कपाल का’टेर मात्रै घर जाने भनेपछि भा’गरथी त्यहाँबाट घर हिँ’डेको प्रहरीले बताएको छ । भा’नदेब र लि’लाधर कपाल का’टन सै’लुन छि’रे ।तर दि’नेश त्यहाँबाट भा’गर’थीको भन्दा चार/पाँच मिनेट पछाडि घरतिर हिँडे । उनले यसअघि आफूले बाटोमा क’सैलाई पनि न’देखेको, विद्यालयबाट पनि पु’रै कक्षा पढेर आएको जस्ता झु’टो कु’राले उनीमाथि ग’हिरो अनुसन्धान था’लेको थियो। ‘दिनेशले विद्यालयबाट हिँ’डेको समय १:४५ बजे हो । भा’गर’थी र तीनैजनाको १:५० मा खो’चलेकमा भेटभयो । त्यसपछि घ’टनास्थल पुग्ने समय भनेको झण्डै ४० मिनेट अथवा २:३० हो । तर दिनेश ३:२५ सम्म घ’टनास्थल नजिकै छन् । उनले, घरमा पुरै पि’रियड पढेर आएको भनेपनि प’त्याउन न’सकिने देखिन्छ । ‘
प्रहरी स्रोत भन्छ,’ तर उनले टि’फिनमा कक्षा छो’डेपछि र घर ढि’लो पु’गेको प’त्ता ला’गेपछि अनुसन्धान बढी के’न्द्रित पा’रिएको थियो।’ प्रहरीले दिनेशलाई ३ :२५ मा घ’टनास्थल न’जिकैको ल’वलेकको न’वनिर्मित मै’दान नजिक देखेको प्र’त्यक्षदर्शीले बताएका छन्। ‘प्र’त्यक्षदर्शीका आधारमा अनुसन्धान अझ स’हज भएको प्रहरीले ज’नाएको छ। दिनेश श’व भेटिएको दिन घ’टनास्थलमा थिए ।उनी केही बेर मात्र घ’टनास्थलमा बसेर छि’ट्टै घर फर्किए । त्यसदिन घ’टनास्थलमा पुगेका प्रहरीहरुले घ’टनास्थल सि’ल पा’रिसकेको थियो ।
त्यहाँ प्रहरीको ता’लिम प्राप्त कुकुर आ’उने भएकाले घ’टनास्थलमा कसैलाई न’जान भ’निएको थियो । भा’गर’थीको श’व उ’ठाएको दिन अथवा घ’टनास्थलमा धनगढीबाट ता’लिम प्राप्त कुकुर पु’गेको दिन दिनेश त्यहाँ गएनन् । ‘उनको ट्’राभल हि’स्ट्री हेर्दा उनी तालिम प्राप्त कुकुर आएको दिन गो’ठालो गएका रहेछन्,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने ।भा’गर’थीकी आमाले भा’गर’थी आइन र ? भनि सोध्दा दिनेशले न’देखेको बताएका थिए । ‘भा’गर’थीको खो’जी गर्दा, फोन ग’र्दा उनी ड’राएर छ’टपटिए झैं हुन्थे, ‘ती प्रहरी अधिकृतले भने ।
तर मंगलबारको बेलुकी उनले सा’विति ब’यानमा आफूले भा’गर’थीको ह’त्या गरेको स्वी’कार ग’रेका छन् ।म मध्यान्तरमा स्कुलमा (स’नातन ध’र्म मावि) भलिबल खे’लेर घर आए । त्यसपछि खो’चलेकमा मेरो भा’गर’थीसहितका अरु तीनजना आफ्नै गाउँका युवाहरुसँग भेट भयो । उनीहरु कपाल का’ट्न थाले । म त्यहाँबाट घरतिर हिँडे । मैले सि’ल्ल भन्ने स्थानमा भा’गर’थीलाई भेटे र म फ’टाफट ती भन्दा अगाडि घरतिर लागे । घ’टनास्थल भएको स्थानमा म भा’गर’थी भन्दा अगाडी नै पु’गिसकेको थिए । केही बेरमा भा’गर’थी आइन।
उनले पु’ग्ने वित्तिकै मैले सडकबाट ध’क्का दिएर सानो खो’ल्सोमा (जहाँ श’व भेटिएको थियो) ल’डाए । उ ल’डी र घा’इते भइ । अनी मैले घाँ’टी थि’चेर मा’रिदिए । त्यसपछि म घर हिँडे । दिनेशले भा’गर’थीको ह’त्या गरेको सा’विति ब’यान दिएपनि उनले ब’ला’त्का’र’का बारेमा भने मौ’नता देखाएको प्रहरीले जनाएको छ । उनको, पुरै बयान सिआइबीका डिएसपी पञ्चकुमार बा’कुले लिएका थिए । पञ्चकुमार अ’ब्बल अ’पराध वि’ज्ञ मा’निन्छन् । जिल्ला अस्पताल बैतडीले भा’गर’थीको यौ’नांगमा यौ’न’जन्य ग’तिविधि भएको र घाँ’टी नि’मो’ठेर ह’त्या भएको पो’ष्ट’मा’र्ट’म रि’पोर्ट प्रहरीलाई बु’झाएको छ ।
घ’टनाको प्रकृती हेर्दा पनि भा’गर’थीको तल्लो अं’गको व’स्त्रहरु फु’कालिएका छन् भने उनको यौ’नां’गबाट धेरै र’ग’त ब’गिरहेको भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा वि’स्तृत ब’यान भइरहेको छ, यी त सबै प्रा’रम्भिक बयानका आधारमा आएका कुरा हुन, ‘ती प्रहरी अधिकृतले भने । दिनेशको सोधपुछमा ख’टिएका प्रहरी अधिकृतले उनलाई कुनै पनि मा’नसिक र शा’रीरिक यात’ना नदिएर फ’काएर ब’यान गराएको बताएका छन् । ब’यानमा सहभागी ती अधिकृत भन्छन्, ‘ना’बालक हो, ना’बालकलाई केही स’जाय छु’ट पनि हुन्छ, भनेर फ’काइयो।
मंगलबार अ’बेर राती मात्रै सा’विति ब’यान दिए । उनी धेरै रो’ए, अनी घ’टना बा’रे भने ।’घ’टनाको अनुसन्धानका लागि माघको २५ गते देखि घ’टनास्थलमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डि’आईजी उत्तम सुबेदी, संघीय प्रहरी कार्यालयका एसएसपी जनकराज पाण्डे, सि’आईबीका डिएसपी पञ्चकुमार बा’कु सहितको टो’लीले अ’भियुक्तलाई बुधबार दिउँसो २ बजे सार्वजनिक ग’र्दैछन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीमा अ’भियुक्त सार्वजनिक हुने प्रहरीले ज’नाएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट
Prevभागरथी घटनामा उनकै भाई संलग्न ! बयानमा भन्छन् ‘दिदी चाउचाउ खाँ दै आइन्, पछाडीवाट ध क्का दिएर ल डाएँ’
Nextजतिसुकै बिजी भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : तपाईंको जीवनमा पक्कै परिवर्तन आउनेछ !
यस्तो छ तपाईको बिहिबारको भाग्य, पाथिभारा माताको दर्शन गरि फागुन ६ गतेको राशीफल हेर्नुहोस्
गङ्गामायाको छोराको ज्यान लिनेलाई तुरुन्तै कारवाही गरि जेल हाल्नु भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले दिईन निर्देशन, यस घटनामा पुर्व माओबादीका यी नेताहरु पक्राउ पर्दै